Roberto Firmino oo u sharaxan inuu noqdo badalka Luis Suarez ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 19 Okt 2018. Barcelona ayaa u magacawday weeraryahanka kooxda Liverpool Roberto Firmino mid ka mid ah ciyaartoyda ugu cad cad ay dooneyso inay kaga dhigato badalka Luis Suarez xilli ciyaareedka soo socda, waxaa sidaas daboolka ka qaaday wargeyska Mundo Deportivo.
Luis Suarez ayaa noqon doono 32 jir bisha January ee soo aadan, waana sababta ay Barcelona u qorsheeneyso inay raacdo ugu gasho saxiixa weeraryahan cusub, si aysan dhibaato kala kulmin dhanka weerarka, hadii ay dhacdo in hoos u dhac uu ku yimaado qaab ciyaareedkiisa ama uu u dhaqaaqo koox kale.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in weeraryahanka ugu cad cad ee kusoo jeeda kooxda Barcelona uu yahay kan kooxda Genoa Krzysztof Piątek iyo Nicolas Pépé oo u ciyaara kooxda reer France ee Lille.
Warbixinta ayaa waxay intaas kusii dartay in Roberto Firmino uu qeyb kasoo noqday liiska ciyaartoyda ay xiiseeneyso kooxda Barcelona si uu u noqdo isna badalka Luis Suarez.
Si kastaba Philippe Coutinho ayaa Liverpool uga soo biiray kooxda Barcelona sanadkii hore aduun dhan 140 milyan euro, wuxuuna wargeyska reer Catalonia sheegay in Reds ay diyaar u tahay inay ku iibsato Firmino qiimo intaas ka yar.